नया पुस्ता किन हुन्न ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधिको शासनलाई कुल्चेका हुन् । उनको प्रशंसा गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन । निश्चय नै नाकावन्दीका बेलामा र पछि कालापानी, लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्न उनले साहस देखाएकै हुन् । त्यसो भनेर उनले गरेका सबै गल्ती कमजोरी र निरंकूशताजस्ता कार्यहरूको प्रशंसा गर्न सकिदैन ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद बिघटनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले, असंवैधानिक भनिदिएकाले ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाहा चलिरहेको छ । निश्चय नै आफ्ना निर्णय गलत साबित भएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । नैतिकता त देखाउनै पर्छ । तर, नैतिकता देखाउन जसजसले गरिरहेका छन्, ती कतिसम्मका नैतिकवान नेता हुन् ?
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन माँग गर्ने को को हुन् ? प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू । ओलीलाई हटाउ भन्नुको अर्थ यिनैलाई स्थापित गर्नु हो भने यी नेताहरू नैतिकवान हुनुप¥यो नि । अदालतको आदेश आउनासाथ आफूले नसकेर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुप¥यो, सहकार्य गर्न तैयार छौं भनेर जाने यिनै हुन् । जोसँग नैतिकता छैन, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार हटाएर प्रतिपक्षी गुहार्नु कुन हदको नैतिकता हो ? र, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासबाट हटाएर आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पनि नैतिकताकै उपहास होइन र ?
कुशासन छ । ओली सरकारले केही पनि राम्रो गतिलो काम गर्न सकेन । भ्रष्टाचार बढायो, हत्या बलात्कारीलाई कारवाही गर्न सकेन । कमिशन एजेण्डसँग मिलोमतो गरिरहेको छ । एउटा कुशासकलाई सत्ताबाट हटाउनु भनेको अर्को कुशासक ल्याउनु हो भने त्यस्तो सत्ता परिवर्तनको अर्थ र औचित्य के रहला ?
हामीले खोजेको कुशासक र कुशासन नै हो कि साँच्चिकै परिवर्तन ?
नागरिक अभियन्ता, अन्य दलका नेताहरूसमेत नयाँ पुस्ता चाहियो, बुढा नेताहरू सल्लाहकारको सम्मानका साथ बस्नुहोस् भन्न कसैले सकेन । जबसम्म नयाँ पुस्ताका नेताहरू अगाडि आउने छैनन्, तबसम्म परिवर्तन बाँदरको हातको नरिवल नै हुनेछ, हामीले परिवर्तन खोजेका हौं भने हरेक युवा नेताले बोल्नसक्नुपर्छ ।
युवापुस्ता किन नेताका कार्यकर्ता हुन रमाइरहेका होलान् ? अचम्म छ ।